Survey Traditional zivaliwe, boring, futhi isuswe kusuka ekuphileni. Manje singambuza imibuzo ecatshangelwe okushukumiwe eyengeziwe ekuphileni, evulekile, futhi kumnandi more.
Inani uhlaka Iphutha inhlolovo ikhuthaza abacwaningi ukucabanga mayelana nocwaningo inhlolovo inqubo ezimbili ingxenye: ukuqasha abaphendulayo ebabuza imibuzo. In the ngokuhlinzwa kwangaphambilini I ngekutsi age digital kushintsha indlela thina athole Kubantu abaphendula, futhi manje ngizobuya sixoxe ngendlela yobudala digital kwenza izindlela ezintsha ukubuza imibuzo. Lezi izindlela ezintsha ingasetshenziswa enamaphutha ematfuba amasampula noma amasampula non-ematfuba.
A imodi inhlolovo imvelo lapho kubuzwa imibuzo, futhi kungaba nemithelela ezibalulekile kwi nesilinganiso (Couper 2011) . In the era yokuqala yocwaningo inhlolovo imodi ezivame kakhulu kwaba ubuso nobuso, futhi esikhathini inkathi yesibili mode ezivame kakhulu kwaba ngocingo. Abacwaningi abaningi babheka inkathi yesithathu yocwaningo inhlolovo njengoba nje ukunwetshwa inhlolovo izindlela ukuze ihlanganise-computer kanye nomakhalekhukhwini. Nokho, lapho ngineminyaka engu digital ingaphezu nje ushintsho amapayipi okuyothi imibuzo nezimpendulo flow. Kunalokho, aphuma Analogue Digital kwenza-futhi lokho kungase kudinge-abacwaningi ukushintsha esiyicelayo kanjani.
Ucwaningo olwenziwa uMichael Schober kanye nozakwabo wakukhombisa izinzuzo ukuzivumelanisa ukubuza amakhono kanye izindinganiso zomphakathi ezizungeze ubuchwepheshe obusha (Schober et al. 2015) . Ocwaningweni, Schober kanye nozakwabo kuqhathaniswa izindlela ezahlukene ngokubuza abantu imibuzo ngomakhalekhukhwini. Ayeqhathanisa izingxoxo izwi, okuyinto kwakuyoba inguqulo yemvelo wesibili inkathi kusondela, ukuze ukuqoqa idatha nge imiyalezo eminingi umbhalo, indlela kungabikho sandulela ezisobala. Schober kanye nozakwabo bathola ukuthi ithumelelana nothile imiyalezo ngemva kwaholela idatha izinga eliphakeme ukwedlula izingxoxo izwi. Ngamanye amazwi, umane ngokudlulisela lusondela ubudala ungene ubuchwepheshe obusha wayengekho le ndlela engcono. Kunalokho, abacwaningi kuyodingeka ngokwezifiso izindlela zethu kokubuza kulezi ezisekelweni ezintsha.
Kukhona Ubukhulu eziningi okuhamba kuyo abacwaningi ngetigaba inhlolovo izindlela, kodwa isici esibucayi kakhulu digital ubudala inhlolovo izindlela siwukuthi bangamalungu zaphathwa-computer, kunokuba lomsakazi-esilawulwa (njengasezulwini ngocingo futhi ubuso nobuso survey). Ukuthatha interviewers womuntu aphume inqubo iqoqo idatha kunezinzuzo amakhulu wethula ezithile ezingathandeki. Ngamagama izinzuzo, asuse interviewers ephawulekayo kunciphisa izindleko-interview ungomunye izindleko ezinkulu kuleli inhlolovo zocwaningo kwandise Ukuzivumelanisa nezimo; wabaphenduli bangabamba iqhaza uma befuna, hhayi kuphela lapho i lomsakazi iyatholakala. Nokho, asuse lomsakazi Kwenza ukuhlola ezinye izindlela. Ikakhulu, interviewers okuyizona ezibalulekile ekukhuthazeni abaphendula iqhaza ukubagcina kona wahlanganyela ngenkathi slogging ngokusebenzisa survey eside futhi ngezikhathi ezithile eyisicefe.
Okulandelayo, ngizobuya ukuchaza lusondela ezimbili ezibonisa indlela abacwaningi ingakwazi amathuluzi yobudala digital ukubuza imibuzo ehlukile: ekulinganiseni uthi yangaphakathi ngesikhathi ezifanelekayo bese ubeka ngokusebenzisa olungakaze lwenziwe Luhlolo besikhashana (Isigaba 3.5.1) bese kuhlanganiswa inchumbi emandla of open ended kanye close nalevulekile inhlolovo imibuzo ngokusebenzisa wiki survey (Isigaba 3.5.2). Nokho, isinyathelo, ezibuza zaphathwa-computer ikuyo yonke kusho ukuthi kudingeka ukuba aklame izindlela kokubuza ukuthi kukhona kujabulise kakhudlwana abahlanganyeli, inqubo ebizwa ngokuthi gamification (Isigaba 3.5.3).